Fepetran'ny fifanarahana ankapobeny ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Alohan'ny hifanarahana amin'ny serivisy apetrakao amin'nity tranokala ity dia ilaina ny mamaky ny fepetra sy teny mifandraika amin'ny fanomezana ny serivisy natolotry ny mpanaraka. .: Fivarotana vokatra amin'ny endrika nomerika sy serivisy marketing amin'ny Internet.
Azon'ny mpampiasa atao ny miditra sy manakarama ireo serivisy mpanara-dia azy ireo ireto ihany rehefa avy mamaky sy manaiky ireo fepetra ireo.
Amin'ny fanekena ireo fepetra ireo, ny mpampiasa dia voafatotr'ireo fehezan-teny ireo, izay miaraka amin'ny politika momba ny tsiambaratelo, mifehy ny fifandraisanay amin'ny orinasa.
Raha tsy ekena amin'ny ampahany amin'ilay fiteny ianao dia tsy afaka manakarama ny tolotra omena.
followers.online dia manana zo hanova na hanova ireo fepetra ireo amin'ny fotoana rehetra. Raha toa ka manova fiovana lehibe ireo fanovana ireo dia hampandre anao amin'ny mpanaraka azy ny mpanampy.online amin'ny alàlan'ny famoahana fanambarana amin'ity tranokala ity.
Ny serivisy atolotra omena dia tsy an'ny olon-tsotra sy olona izay 18 taona monja farafahakeliny.
Nohavaozina tato ho ato ny 14/04/2016 ireto teny ireto
Mifanaraka amin'ny fanomezana ny lalàna 34/2002 momba ny Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), ireto fampahalalana manaraka ireto dia aroso:
• Fampahafantarana ao amin'ny AGPD: "Mpisera sy mpamatsy tranonkala" "Mpanjifa sy mpamatsy".
• hetsika ara-tsosialy dia: serivisy marketing amin'ny Internet.
Serivisy atolotra ao amin'ity tranokala ity
followers.online dia manome ny serivisy manaraka ireto manaraka ny fepetra misy azy amin'ny fifanarahana manokana:
• Famolavolana paikady fifandraisana an-tserasera / ivelany.
• Famoahana gazety an-gazety sy fandefasana gazety na fizarana fizarana.
• Fanoratana votoaty amin'ny orinasa.
• Fifandraisana amin'ny haino aman-jery sy masoivoho.
• Ny sary nomerika ho an'ny mpanao gazety, tranonkala ary hetsika.
• Fanarenana fototra ao amin'ny JPG sy ny fampandrosoana ny RAW.
• Fiofanana fototra amin'ny sary nomerika.
• consulting SEO momba ny tranonkala, bilaogy ary e-Commerce.
• Basic SEO ho an'ny atiny tranonkala.
• Fakafakao sy famoronana mombamomba ny rohy (SEO off page).
• Fametrahana, fanamafisana ary fahombiazan'ny WordPress na Joomla.
• Fampitaovana votoaty: gazety, magazine, katalog, boky, bokikely, pdf ary ebook,
• Fototra fototra amin'ny afisy, karatra, flayers, sora-baventy ary CTA amin'ny tranonkala.
Marketing Marketing sy marketing Marketing
• Fandrafetana paikady sy drafitra sosialy.
• Fanoratana votoaty ho an'ny bilaogy, tranonkala na microsites.
• fitantanana ny mombamomba sy ny votoaty sosialy (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• Fanentanana SEM (AdWords, Doka Facebook, Doka Twitter)
• Lahatsary momba ny vaovao sy ny doka.
• Fanaraha-maso ara-teknika an'ireo latabatra analog.
Amin'ny maha-fepetra iray hanao fifanekena ireo tolotra atolotra, takiana ianao hisoratra anarana amin'ny endrika mifanaraka amin'ny followers.online ary hanome fampahalalana momba ny fisoratana anarana. Ny fampahalalana momba ny fisoratana anarana omena dia tokony ho marina, feno ary havaozina amin'ny fotoana rehetra. Ny tsy fanaovana izany dia fanitsakitsahana ireo fepetra, ka mety hiteraka fanimbana ilay fifanarahana miaraka amin'ny mpanaraka.online.
Ny serivisy sasany dia mety misy ny vahaolana ho an'ny antoko fahatelo. followers.online dia afaka manome rohy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ho mpiara-miasa mifandray amin'ny followers.online ho an'ny fanomezana serivisy sasany.
Ekenao koa fa ny serivisy dia mety misy amina vahaolana fiarovana izay mametra ny fampiasana ary tsy maintsy mampiasa ireo serivisy ireo ianao arakaraka ny fitsipi-piainana napetraky ny mpanara-dia azy.online sy ny mpiara-miasa aminy ary ny fampiasana hafa dia toa fandikan-dalàna momba ny zon'ny mpamorona.
Voarara ny manova, miala, manodinodina injeniera, manongotra, manala na manova na inona na inona fomba ny teknolojia fiarovana omen'ny mpanara-dia azy.online na inona na inona antony.
Ny fanitsakitsahana ny rafitra sy ny tambajotra dia mety hiteraka andraikitra momba ny sivily na heloka bevava.
Vidiny sy ny fomba fandoavam-bola
Manaiky ianao ny handoa ireo tolotra nampifandraisan'ny mpanaraka azy.online amin'ny endrika fandoavana neken'ny mpanara-dia azy.online sy ho an'ny vola mifameno (ao anatin'izany ny hetra sy ny saram-pandoavana farany, raha mety)
100_XNUMX hatrany ny fandoavam-bola ary homena ny serivisy rehefa hanamarina ny fandoavana isika.
Ny vidiny ampiharina amin'ny vokatra tsirairay sy / na serivisy ireo dia aseho ao amin'ny tranokala amin'ny daty baikon'ny baiko, ao anatin'izany, raha misy azo ampiharina, ny VAT (Tax Tax Tax) rehetra ho an'ny fifanakalozana eo amin'ny faritany Espaniôla.
Rafitra iraisan'ny hetra iraisan'ny Vondrona eoropeana
Araka ny fepetra voalazan'ny lalàna 37/1992, tamin'ny 28 desambra, ny lalàna mifehy ny hetra sy ny Direction eoropeanina 2008/8 / EC, dia azo atao ny manilika na tsia na tsia. arakaraka ny tanin'ny mpividy ary ny toe-javatra izay iasa (mpandraharaha / matihanina na olon-tsotra). Vokatr'izany, amin'ny toe-javatra sasany, dia azo ovaina ny vidin'ny baiko farany momba ny voalazan'ny tranokala.
Ny vidin'ny serivisy na infoproductos amidin'ny mpanera.online dia ahitana ny VAT espaniola. Na izany aza, ny vidin'ny farany baikon'ny baiko dia mety miovaova arakaraka ny tahan'ny VAT izay mihatra amin'ny filaminana. Ho an'ny baiko voatokana ho an'ny firenena hafa ao amin'ny Vondrona Eropeana, Esorina ny VAT espaniola ary ny fampiharana ny hetra VAT mifanandrify amin'ny firenena aleha. Ny vidiny farany dia hipoitra mandritra ny fanamafisana ny baikonao ary ho taratry ny tahan'ny VAT mifanaraka amin'ny tanin'ny toerana itondrana ny vokatra.
Mety hiova amin'ny fotoana rehetra ny vidin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitr'ireo mpanaraka azy manokana.online. Ny serivisy dia tsy manome fiarovana na famerenana ny vidiny raha toa ny fihenan'ny vidiny na ny tolotra fampiroboroboana.
followers.online dia manaiky ireto fomba fandoavam-bola ireto:
Modely ny fanohanana sy ny fampiasana mety
Ny serivisy dia tsy maintsy angatahina amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana tokony horaisina sy hamaliana ao anatin'ny fotoana mety.
Ireo fantsona ireo dia ireo endrika mitovy hita any amin'ireo tolotra atolotra.
Ny fangatahana tsirairay dia iharan'ny fanombanana sy fankatoavana avy amin'ny followers.online.
followers.online dia afaka manome vahaolana hafa ho an'ny mpanjifa ao anatin'izany ny referral amin'ny tamba-jotra an'ny followers.online mpiara-miasa.
Fampiharana faran'izay mety
Ny teny hoe "tsy voafetra" dia iharan'ny fehezan-dalàna ampiasaina. Ny famaritana ny fampiasana ara-drariny dia faritan'ny mpanaraka.online, amin'ny azy manokana sy irery. Ireo mpanjifa izay mpanaraka.online dia mihevitra fa manararaotra ny serivisy dia hifandray amin'ny mpanaraka.online.
followers.online dia manana zo hampiato ny serivisy raha mihevitra isika fa mihoatra ny fehezan-kevitra mety ampiasaina izany.
followers.online dia tsy hiantoka fa ny fisian'ny tolotra serivisy amin'ity fifanekena ity dia mitohy ary tsy misy fahatapahana, ary koa ny fahaverezan'ny angon-drakitra natolotry ny mpizara azy, ny fanelingelenana ny asa ara-barotra na ny fahasimbana azo avy amin'ny fandidiana ny serivisy. na izay antenaina nateraky ny mpanjifa, vokatry ny:
1. Mahatonga any ivelan'ny fifehezana ny mpanaraka.ny antony tsy mahomby amin'ny antony sy / na antony lehibe.
2. Fiatoana vokatry ny fampiasana tsy mety ataon'ny mpanjifa, indrindra ireo avy amin'ny fifanarahana asa tsy mendrika ho an'ny karazana hetsika sy fampiasan'ny Mpanjifa sy / na ataon'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny tranokalany.
3. Fijanonana voatokana sy / na fanovana ny votoatin'ny fifanarahana ifanaovan'ny andaniny roa amin'ny fikojakojana na fanaovana hetsika miavaka izay nifanekena teo aloha.
4. Virus, fanafihana solosaina ary / na zavatra hafa ataon'ny antoko fahatelo izay miteraka ny tsy fananana tanteraka na ampahany amin'ny fanomezana ireo tolotra.
5. Ny asa diso na maharatsy ny Internet.
6. toe-javatra tsy ampoizina hafa.
Amin'izany fomba izany, ny Client dia manaiky ny hizaka ireo toe-javatra ireo ao anatin'ny fetra mety, izay nanehoany mazava tsara fa hitaky andraikitra amin'ny fifanarahana na fifanarahana fanampiny avy amin'ny Online SL momba ny tsy fahombiazana, ny lesoka ary ny fampiasana ny serivisy nifanarahana.
Ny SL an-tserasera dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tranga hafa na lesoka vokarin'ny fampiasan'ny mpanjifa tsy mahomby sy ratsy. Tsy ho tompon'andraikitra amin'ny vokatra lehibe na kely ihany koa ny Online SL noho ny tsy fisian'ny fifandraisana eo amin'ny Online SL sy ny mpanjifa raha toa ka tsy miasa ny mailaka omena na ny fanadiovana ny angon-drakitra nomen'ny Client ao amin'ny rejisitry ny mpanaraka azy ireo. .
Anton'ny fanafoanana ny fifanekena
Ny fanafoanana ny fifanekena serivisy dia mety hitranga na oviana na oviana.
Tsy voatery hijanona miaraka amin'ny mpanara-dia azy ianao.online raha tsy afa-po amin'ny serivisinay ianao.
followers.online dia mety hamarana na hanemotra na inona na inona ary ny serivisy rehetra mifandraika amin'ny followers.online avy hatrany, tsy misy fampandrenesana mialoha na tompon'andraikitra, raha tsy mifanaraka amin'ny fepetra napetraka eto ianao.
Rehefa rava ny fifanekena, ny zonao hampiasa ireo serivisy dia hitsahatra avy hatrany.
Ireto manaraka ireto dia antony mahatonga ny fanesorana ny fifanarahana:
• Ny lainga, amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany, momba ny angon-drakitra natolotra amin'ny fizahana serivisy serivisy.
• Miova, mihodinkodina, manova injeniera, mihasimba, manala na manova na inona na inona fomba ara-teknolojia omen'ny mpanaraka.online.
• Ireo tranga fanararaotana momba ny serivisy fanohanana noho ny fitakiana adiny maro kokoa noho ireo napetraka ao amin'ny fifanarahana.
Ny fanafoanana dia manondro ny fahaverezanao ny zonao amin'ny fanompoana omena fifanarahana.
Fahamarinana amin'ny vidiny sy tolotra
Ireo tolotra atolotra amin'ny tranokala, sy ny vidin'ireto, dia ho azo amidy raha toa ka ao anaty katalaogy serivisy naseho amin'ny alàlan'ny tranokala izy ireo. Ireo mpampiasa dia angatahina hiditra ao amin'ny tranokala misy vaovao nohavaozina mba hialana amin'ny lesoka vidiny. Na izany na tsy izany dia ny fitazonana ny diany dia mihazona ny feon-dry zareo mandritra ny 7 andro manomboka amin'ny fotoana naha-ara-dalàna azy.
Fanesorana ny varotra
Ny fialana dia ny ny herin'ny mpanjifa tsara hampodiana azy ho varotra ao anatin'ny fe-potoana 14 andro, tsy voatery hitaky na hanome fanazavana na hanasazy.
Ny zon'ny fisintahana dia tsy azo ampiharina (afa-tsy hadisoana na fahadisoana amin'ny vokatra na serivisy serivisy), amin'ireto tranga manaraka ireto izay nomen'ny andininy faha-45 amin'ny lalàna varotra.
• Ny fifanarahana amin'ny famatsiana entana natao araka ny voafaritra manokana momba ny mpanjifa na natao manokana, na izany, noho ny toetrany, dia tsy azo averina na mety hanimba na ho lany haingana.
• Ireo fifanarahana amin'ny famatsiana rakitra feo na horonan-tsary, kapila ary programa amin'ny solosaina izay tsy nohamafisin'ny mpanjifa, ary koa ny rakitra solosaina, nomen'ny elektronika, izay azo alaina na mamerina avy hatrany ho fampiasa maharitra.
• Ary amin'ny ankapobeny, ireo vokatra rehetra nomena ny elanelan'ny elanelana misy antsika: akanjo, fivoarana sary, sns, na mety ho mora mandika (boky, mozika, lalao video, sns).
Ny vanim-potoana fanonganana ao vokatra momba ny dizitaly (toy ny boky nomerika), dia haatoana amin'ny fotoana ampiasaina ny fanalahidy hidirana ny atiny nomerika.
Ny zon'ny fisintahana, araka ny andininy faha-103.a ny lalàna 1/2007, dia tsy ampiharina amin'ny fanomezana ny serivisy, rehefa vita ny asa rehetra, rehefa nanomboka ny fanatanterahana, miaraka amin'ny fanekena mialoha ny mpanjifa sy mpampiasa ary miaraka amin'ny fankasitrahana ny anisany dia fantany fa, rehefa vitan'ny mpanara-dia azy tanteraka ny fifanarahana. ho very ny zony hampiala azy.
Aorian'ny fanekena ny fanatontosana ny asa vita tamin'ny fifanarahana, dia hilazalazana anao ny daty fanombohan'izy ireo.
Raha ny zon'ny vahaolana dia ampiharina Andro 10 Alohan'ny fanombohan'ny serivisy, ny valim-panadihadiana dia mandray ny vola voarainy tsy misy fitazonana azy ary tsy afaka 14 andro aorian'izay. Raha io havanana io dia efa nampiasaina a fe-potoana latsaky ny 10 andro, 50% amin'ny vola no haverina, ary raha ampanaovina any aoriana dia tsy hisy vola karama.
Torak'izany koa, ny mpanokatra.online dia mety hanohy hanafoana ny fifanarahana raha toa ka tsy naloan'ny mpampiasa na ny hetsika sasany napetraka tao amin'ilay faritra momba ny antony mahatonga ny fanafoanana ny fifanekena.
Ahoana ny hanafoanana ny fifanekena serivisy
Raha maniry ny hanafoana ny fifanekenao amin'ny mpanara-dia azy ianao, dia tsy maintsy miantso anay amin'ny fangatahana fanalavirana ny fifanarahana alohan'ny nanombohan'ny serivisy ny fifanarahana (jereo ny fizahana sy ny fisintonana eto ambany)
followers.online dia manome antoka ny mpanjifa ny famerenana ny vola naloany ao anatin'ny fe-potoana efatra ambin'ny folo (14) andro alimanaka isaina hatramin'ny datin'ny fifandraisana azo itokisana momba ny fampiasana ny zony hakana fialana raha toa ka mahafeno ny fepetra izany ary efa neken'ny seguidores.online.
Vokatry ny fanesorana
Raha misy ny fanesorana anao, haverintsika ny vola rehetra noraisinao taminao tsy misy fahatarana ary raha misy izany, dia tsy mihoatra ny 14 kalandrie andro manomboka amin'ny fotoana nampandrenesanao anao ny fanapahan-kevitra hialanao. amin'ity fifanarahana ity ary nomena izany fa efa nampandrenesina 10 andro mialoha ny fotoana nanombohan'ny asan'ny fifanekena.
Hanohy ny valin-kafatrao izahay amin'ny alàlan'ny fomba mitovy amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola nampiasainareo tamin'ny fifanakalozana voalohany, raha tsy hoe tamin'ny fomba mazava no nanomezanao azy tamin'ny fomba hafa; Na izany na tsy izany dia tsy hihary fandoa-bola noho ny vola nomena ianao.
Raha ny serivisy izay tanjon'ity fifanarahana ity dia natomboka nandritra ny fotoana nisintona (14 andro), mifanaraka amin'ny andininy 108.3 amin'ny lalàna 1/2007, ny Online SL dia afaka mitazona ny ampahany mifanaraka amin'ny serivisy omena, ao anatin'izany ny serivisy fanampiana ary, raha toa ka nomena feno ny serivisy, mifanaraka amin'ny andininy 103.a amin'ny lalàna voalaza etsy ambony, dia tsy hampiharina ny zon'ny fisintonana.
Ny famerenana mifanaraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny PayPal na Stripe dia ho azo amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana mitovy ihany, raha toa kosa ny karazana famerenana hafa dia ho avy amin'ny famindrana banky amin'ny kaonty nomen'ny mpanjifa. Ny famerenana ny vola dia hatao ao anatin'ny 14 andro manaraka ny alimanaka manomboka amin'ny fotoana nampandrenesana anay ny fanapahan-kevitra hialanao.
Ny serivisy rehetra izay nomenay anao, amin'ny alàlan'ny toetrany, dia ho tafavoaka amin'ny fofoana raha toa ka karama feno izy ireo, ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny fananana fananana, mpiampanga, fanonerana ary famerana ny andraikitra.
Modely fitakiana na fanalana endrika
Ny mpampiasa / mpividy dia afaka mampahafantatra anay ny fangatahana na fanesorana, na amin'ny alàlan'ny mailaka: info (at) followers.online na amin'ny paositra mailaka amin'ny adiresy voalaza ao amin'ny taratasy fanonganana.
Adikao ary apetaho amin'ny Word io taratasy io, tanteraho izany ary alefaso amin'ny mailaka na alefaso.
Ho an'ny sain'ny Online SL
fampahalalana (amin'ny) followers.online
Ity dia lazaiko aminao fa mitaky / miala amin'ny fifanarahana amidy amin'ny tsara / fanomezana manaraka ireto tolotra manaraka ireto aho:
Nanofa ny andro: ………….
Raha misy fitarainana dia asehoy ny antony:
RAHA TOKONY NANAO TRANO TRANO MBOLY hamatsy vola ny fividianana lavidavitra ianao dia ampidiro eto ity soratra manaraka ity ao amin'ny fanamarihana ny fisintonana anao:
Fampandrenesina ihany koa ianao fa araka ny andininy faha-29 amin'ny lalàna 16/2011, ny 24 jona, dia misy fifanarahana fampindram-bola, fa hatramin'ny nialako tamina fifanarahana famatsiana entana / serivisy ary nahazo vola / ampahany amin'ny alalàn'ny trosa mifamatotra. Tsy fehezin'ny fifanarahana amin'ny trosa intsony aho fa tsy sazy.
Manaraka, manondro ny anaranao ho mpanjifa sy mpampiasa anao na mpanjifa sy mpampiasa:
Ankehitriny dia manondro ny adiresinao ho mpanjifa sy mpampiasa na mpanjifa ary mpampiasa:
Lazao ny daty hitaky sy hanafoanana ny fifanekena:
Soniao ny fangatahana fangatahana / fisintomana anao raha ampandrenesina amin'ny Online SL amin'ny endrika taratasy izy
(toerana), mankany ………………………………………………………………………. 20…
Ny famerenana ny vola dia hatao ao anatin'ny 14 andro manaraka amin'ny alimanaka manomboka amin'ny fankatoavana ny fiverenanao.
Fitsipika Eropeana momba ny mpanjifa
Ny vaomiera eropeana dia namorona ny sehatra eoropeana voalohany amin'ny famahana ny fifanolanana eo amin'ny varotra an-tserasera izay feon'ny lalàna momba ny mpanjifa farany indrindra. Amin'izany fomba izany, amin'ny maha tompon'andraikitra ny sehatra fivarotana an-tserasera, adidintsika ny mampahafantatra ireo mpampiasa anay momba ny fisian'ny sehatra an-tserasera amin'ny famahana vahaolana fifandirana.
Raha hampiasa ny sehatra fanitsiana ny fifanoherana dia tsy maintsy mampiasa ity rohy manaraka ity ilay mpampiasa: http://ec.europa.eu/odr
Fiarovana ny angon-drakitra manokana
Araka ny lalàna voajanahary 15/1999, tamin'ny 13 desambra, momba ny Fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny Online SL dia mampahafantatra amin'ny mpampiasa fa misy rakitra data manokana fantatra amin'ny anarana hoe "Clients / Suppliers" noforonin'ny sy eo ambanin'ny andraikitry ny Online SL miaraka amin'ny tanjona mety amin'izany fitsaboana izany dia:
1. a) Ny fitantanana ny fifandraisana ara-dalàna eo amin'ny tompon'ny mpanjifany sy ny mpanjifany.
2. b) fitantanana ny fifanarahana amin'ny serivisy amin'ny mpanjifa.
Raha ny zotom-pankatoavan'ny antoko liana; andraikitry ny mpampiasa ny fahamarinan'ny mitovy.
Raha tsy voalaza ny mifanohitra amin'izany, ny tompon'ny angon-droa dia manaiky am-pahefana amin'ny fizotran'ny fahazoan-dàlana an-tsakany sy an-dàlana ho an'ny fotoana ilaina hanatanterahana ny tanjona voalaza.
Online SL dia manolo-tena hanatanteraka ny adidiny amin'ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra manokana sy ny adidiny hitandrina azy ireo, ary hampiasa ny fepetra fiarovana takian'ny lalàna manan-kery mba hisorohana ny fanovana, fatiantoka, fitsaboana na fahazoan-dàlana tsy nahazo alalana azy ireo, hatrany araka ny toetry ny haitao misy.
Ny mpampiasa dia afaka mitantana ny serasera sy mampihatra ny zon'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana ary fanoherana amin'ny alàlan'ny mailaka: fampahalalana (at) followers.online miaraka amin'ny porofo manan-kery toy ny lalàna, toy ny photocopy an'ny DNI na ny mitovy aminy, manondro ilay lohahevitra hoe " Fiarovana DATA ”.
Ireo teny ireo dia miankina amin'ny politika an'ny Online SL.
Ny tsiambaratelo sy ny antontan-taratasy rehetra ampiasaina mandritra ny fifanarahana, ny fampandrosoana ary ny fanatanterahana ny fepetra fifanarahana mifehy ny fifandraisana misy eo amin'ny Online SL sy ny mpanjifa dia tsiambaratelo. Ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo dia tsy ho takatra amin'ny zavatra ambaran'ny fifanarahana eo amin'ny Mpifanaraka, izay lasa fantatry ny besinimaro noho ny antony iray na izay tsy maintsy ambara mifanaraka amin'ny lalàna na amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara manana fahefana mahefa, ary izay azon'ny antoko fahatelo izay tsy fehezin'ny tsiambaratelo. Ny roa tonta dia voatery manefa ny adidy amin'ny tsiambaratelo ary mitazona izany mandritra ny fe-potoana farafahakeliny roa (2) taona aorian'ny faran'ny fepetra nifanarahana voalaza etsy ambony izay mifehy ny fifandraisan'ny Online SL sy ny mpanjifa.
Ny fampahalalana rehetra azon'ny mpanjifa, na ny sary, ny lahatsoratra, ny angon-drakitra toy ny mpampiasa sy ny tenimiafin'ny WordPress, fampiantranoana na hafa, dia hoentina am-pahatokisana, ny famindrana any amin'ny ankolafy telo dia voarara mafy raha tsy ekenay ary ekena hatrany. mitovy tanjona amin'ny ahazoana ny data.
followers.online dia manana zo hanao, amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampilazana mialoha, fanovana sy fanavaozana ny fampahalalana misy ao amin'ny tranokala, ny fanamafisana sy famelabelarana, ny fepetra miditra, ny fepetra fifanarahana sns. . Noho izany ny USER dia tsy maintsy miditra amin'ny pejy nohavaozina amin'ilay pejy.
Tsy misy na iza na iza mpanera.online no tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny fifanekena izay ataonao, ny tsy firaharahiana ny tranokala, ny serivisy na ny atiny, noho ny tombontsoa very, ny fahaverezan'ny fampiasana, na ny fahasimbana tsy mivantana, tsy mivantana, kisendrasendra, fanasaziana na vokatry ny karazany rehetra nateraky ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy avy amin'ireo fitaovana nomena.
Ny hany andraikitry ny followers.online, dia ny hanome ny serivisy fifanarahana momba ny dokam-barotra eo ambanin'ny fe-potoana sy ny fepetra napetraka amin'ity politika fifanarahana ity.
followers.online dia tsy ho tompon'andraikitra amin'ny vokadratsiny, fahavoazana na fatiantoka ateraky ny fampiasana tsy mety amin'ny vokatra na serivisy nomena.
Fananana ara-tsaina sy indostrialy
Ny Online SL dia tompon'ny zon'ny indostrialy sy ara-tsaina rehetra an'ny mpanaraka.online page, ary ny singa ao anatiny, anisan'izany ny magazine azo sintonina ao amin'ny tranonkala.
Fady mafy ny manova, mampita, mizara, mampiasa indray, mandroso na mampiasa ny rehetra na ny ampahany amin'ny atin'ny pejy ho an'ny daholobe na ara-barotra raha tsy nahazo alalana tamin'ny Online SL.
Ny fanitsakitsahana ny zo rehetra voalaza etsy ambony dia mety tsy fanitsakitsahana ireo fepetra ireo, ary koa heloka bevava voaheloka mifanaraka amin'ny zava-kanto. 270 et seq. momba ny Fehezan-dalàna mifehy ny heloka bevava ankehitriny.
Raha tian'ny mpampiasa ny mitatitra izay zava-nitranga, manome hevitra na hanao fitakiana, dia afaka mandefa mailaka any amin'ny mpanaraka (at) followers.online izy ireo manondro ny anarany sy ny anarany, ny serivisy dia mahazo sy milaza ny anton'ny fitakiany.
Raha te hifandray amin'ny Online SL na hampisy ahiahy, fanontaniana na fangatahana dia azonao atao ny mampiasa ireto fomba manaraka ireto:
Ny fiteny izay hifaranan'ny fifanarahana eo amin'ny mpanaraka.online sy ny Client dia espaniola.
Fitsipika ary lalàna azo ampiharina
mpanaraka.online sy NY USER, dia ho entina handamina izay fifanolanana rehetra mety hitranga avy amin'ny fidirana, na ny fampiasana an'ity tranonkala ity, amin'ny alàlan'ny lalàna Espaniola, ary hatolotra ny Fitsarana sy Fitsarana ao an-tanànan'i Granada.